स्वावलम्बन लघुवित्तले पुस ३ सम्म डिम्याट गर्नेको खातामा पठायो ३४% बोनस, अरुको के हुँदैछ ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » स्वावलम्बन लघुवित्तले पुस ३ सम्म डिम्याट गर्नेको खातामा पठायो ३४% बोनस, अरुको के हुँदैछ ?
काठमाडौं : स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकले ३४% बोनस सेयर सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा गरिदिएको छ । स्वावलम्बनले गत पुस ३ गतेसम्म सेयर अभौतिकरण गराएका सेयरधनीको खातामा बोनस सेयर जम्मा गरेको हो ।
यस्तै, कम्पनीले पुस ३ गते भन्दापछि अभौतिकरण गराएका सेयरधनीको बोनस सेयर पनि हिताग्राही खातामा जम्मा गर्न तयारी भइरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ हालसम्म पनि सेयर अभौतिकरण नगरेका सेयरधनीलाई तत्काल एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स, लाजिम्पाट काठमाडौंमा गएर आफ्नो सेयर अभौतिकरण गराउन कम्पनीले अनुरोध गरेको छ ।
अभौतिकीकरण गरेपछि मात्र सेयरधनीको खातामा बोनस सेयर जम्मा हुनेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४१ करोड ८९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले २० करोड ५० लाख ८५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । स्वावलम्बनको प्रतिसेयर आम्दानी ६५ रुपैयाँ २७ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २६१ रुपैयाँ छ ।